Shariif Xasan oo maanta la kulmay Odoyaasha Beelaha ku dagaalmaya Magaalada Marko - iftineducation.com
Shariif Xasan oo maanta la kulmay Odoyaasha Beelaha ku dagaalmaya Magaalada Marko
iftineducation.com – Madaxweynaha Maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa galabta waxa uu Magaalada Muqdisho kula kulmay Odayaasha Dhaqanka ee Beelaha ku dagaalamaya G/ Shabeelada Hoose.
Kulankaan oo uu soo qaban qaabiyay Shariif Xasan Sheekh Aadan, ayaa waxaa ku wehlinaayay C/kariin Xuseen Guuleed, Wasiirkii hore ee Arrimaha Gudaha iyo Amniga Qaranka ee Dowladda Somaliya.
Dhinacyadaan waxay si dhow uga wada hadleen, sidii looga gudbi lahaa dagaalada Gobolka Shabeellaha Hoose, isla-markaana ay labada beelood si nabadgelyo leh ay ugu wada noollaan lahaayeen Gobolkaasi.
Gaba gabadii kulanka, ayaa waxaa si wada jir ah Saxaafada ula hadlay Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo C/kariin Xuseen Guuleed, iyagoona si isku mid ah u sheegay in labada beelood gogol nabadeed loo dhigi doono Degmada Afgooye ee Gobolka Shabeellaha Hoose.
Shariif Xasan waxa uu sheegay in Maamulkiisu uu xoogga saari doono, sidii labadaasi dhinac ay kaga gudbi lahaayeen dagaalada, ayna ka gaaraan heshiis, iyagoo markaasi si nabada ah ku wada noolaada Gobolka.
Shariif Xasan, ayaa xusay in gogosha nabadeed ay dhigayaan Degmada Afgooye, ay ka qaybgeli doonaan beelaha ay xurguftu u dhaxeyso, si ay heshiis ugu kala saxiixdaan.
C/kariin Xuseen Guuleed oo isna ku hadlaayay afka Dowladda Somaliya, ayaa balanqaaday in Dowladdu ay doorkeedu ka qaadan doonto, Ciidamada Dowladda iyo Amisom ay iyana ka qayb qaadan doonaan joojinta dagaal beeleedyada, ku soo noq noqday Shabeellaha hoose.
Xog: Xilkii Sambaloolshe ee DF oo lagu xiray hal arrin oo uusan awoodi karin !!